Zezoita - Wikipedia
Ny Zezoita na Fikambanan' i Jesoa dia fikambanan-drelijiozy katôlika izay natsangan' i Md Ignace de Loyola niaraka tamin' i Md François Xavier ary i Md Pierre Favre, tamin' ny taona 1534 ary nankatoavin' ny papa Paoly III tamin' ny taona 1540, tsy ahitana afa-tsy lehilahy.
Noravana tamin' ny taona 1773 nefa nafatsangan' ny papa Pio VII indray tamin' ny 1814. Tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-21 dia nilaza ho misy mpikambana 17 000 any ho any ny fikambanan' ny Zezoita. I Arturo Sosa no lehiben' izy ireo ankehitriny.
Atao hoe Societas Iesu amin' ny teny latina, izany midika hoe "fikambanan' i Jesoa", sady hafohezina amin' ny hoe S.J. Amin' ny teny frantsay dia atao hoe Compagnie de Jésus io fikambanana io, fa amin' ny teny anglisy kosa Society of Jesus ary amin' ny teny italiana dia Compagnia di Gesù.
Ny andian-teny hoe Ad majorem Dei gloriam no teny filamatry ny fikambanana, izay midika hoe "Ho voninahi-dehiben' Andriamanitra". Ny tanjon' ny fikambanana dia tanterahiny amin' ny alalan' ny fitorian-teny, ny fampianarana sy asa maro samihafa arakaraka ny filan' ny fiangonana. Hatramin' ny niandohany dia nifantoka tamin' ny fampianarana ilay fikambanana sady nampandroso ny fahaizana momba ny teôlôjia sy taranja hafa tsy mahakasika ny fivavahana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zezoita&oldid=1040339"
Voaova farany tamin'ny 25 Novambra 2021 amin'ny 03:58 ity pejy ity.